Akụkọ - Etu esi emefu ekeresimesi oma na mba dị iche iche?
Ekeresimesi oma, enyi m,
O ruola etiti ọnwa Disemba. Ekeresimesi o di anya?
Tupu ekeresimesi eruo, anyi na-asi gi mee osiso ma juo gi oru obi uto na ezi na ulo ohuru na afo ohuru
Daalụ maka ilebara anyị anya ma nwee olile anya na anyị ga-enwe mgbanwe ndị ọzọ na 2021.
Ka anyị kwuo karịa gbasara omenaala ekeresimesi n’obodo dị iche iche.
Nabata ịhapụ ozi ma kpaa nkata gbasara omenala dị iche iche.
1. Ihe Onye Britainndị mmadụ na-akacha elezi anya n’iri nri n’oge ekeresimesi. Nri gunyere ezi anụ, tolotolo, pudding ekeresimesi, ekeresimesi e ghere eghe, wdg. Onye ọ bụla n'ezinaụlọ nwere onyinye na ndị odibo nwere oke. A na-enye onyinye niile n'ụtụtụ nke ekeresimesi. Fọdụ ndị na-abụ abụ ekeresimesi na-agagharị n’okporo ụzọ na-abụ abụ ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ. Onye kpọrọ ha òkù ga-abata n’ime ụlọ iji mee ka ha entertainụrịa ọ themụ ma ọ bụ nye ha obere onyinye.
2. N'ihi na United States bụ mba nwere ọtụtụ agbụrụ, ọnọdụ ebe ndị America na-agba ekeresimesi bụkwa ndị kasị sie ike. Ndị kwabatara si mba dị iche iche ka na-agbaso omenala obodo ha. Agbanyeghị, n'oge ekeresimesi, ihe mkpuchi na ihe ịchọ mma ndị ọzọ pụrụ iche na mpụga ọnụ ụzọ ndị America bụ otu.
3. Nkezi okenye na France Ọ fọrọ nke nta ka ọ gaa ụka iji gaa uka nke etiti abalị na Christmas Eve. Mgbe nke ahụ gasịrị, ezinụlọ ahụ gara n'ụlọ nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị nke nwanyị nke okenye nke nwanyị lụrụ di na nwunye iji jikọtakwa ọnụ maka nri abalị. Nzukọ a na-ekwu maka ịkọwa okwu dị mkpa n'ụlọ, mana ọ bụrụ na enwere ndị ezinaụlọ na-ekwekọrịtaghị, esemokwu ahụ gbanwere mgbe emesịrị. Onye ọ bụla aghaghi idozi dika na mbu, yabụ ekeresimesi bụ ụbọchị ọma na France.
4. inmụaka nọ Spain ga-etinye akpụkpọ ụkwụ n'èzí ụzọ ma ọ bụ windo iji nata onyinye Krismas. N'ọtụtụ obodo, e nwere onyinye maka ụmụaka kachasị mma. A na-emekwa ka ehi ndị ahụ emeso nke ọma ụbọchị ahụ. Ọ bụ kwuru na mgbe a mụrụ Jizọs, ehi na-ekuru ume n’ime ya iji kpoo ya ọkụ.
5. Kwa .Talian ezinụlọ nwere ihe nlereanya nke akụkọ ọmụmụ. N’uhuruchi ekeresimesi, ezinulo ha gbakọtara maka nnukwu oriri wee gaa Mass Mass n’etiti abalị. Emechara m gaa leta ndị ikwu na ibe. Ọ bụ naanị ụmụaka na ndị agadi natara onyinye. Na ekeresimesi, ndi havetali nwere omenaala di nma. Mụaka na-ede edemede ma ọ bụ abụ iji gosipụta ekele ha nwere n’ebe ndị mụrụ ha nọ maka nzụlite ha n’afọ gara aga. E zoro ọrụ ha na akwa nhicha, n'okpuru efere ma ọ bụ akwa ákwà tupu ha eri nri abalị Krismas, ndị mụrụ ha wee mee ka ha ahụghị ha. Mgbe ha risịrị nnukwu nri, ha weghachitere ya ma gụọrọ ya mmadụ niile.
6. Onye Ndị Sweden na-anabata ndị ọbịa. Na ekeresimesi, ọ ga-ahụ ihe doro anya. Otu ezinụlọ mara mma. Ma ndị ọgaranya ma hà dara ogbenye, a na-anabata ndị enyi, ọbụnakwa ndị bịara abịa nwere ike ịga. A na-edobe ụdị nri ọ bụla na tebụl ka onye ọ bụla rie. .
7. Denmark mbụ webata ekeresimesi
stampụ na stampụ mgbochi ụkwara nta, nke ewepụtara iji nweta ego maka ego mgbochi ụkwara nta. Enweghi stampụ dị otú a na akwụkwọ ozi ekeresimesi nke ndị Denmark zipụrụ. Ndị na-enweta ozi ịntanetị ga-enwe mmetụta dị ka ya mgbe ha hụrụ stampụ Christmas ọzọ!